अफ्रिका - ALinks
दक्षिण अफ्रिकामा कसरी काम पाउने?
सेप्टेम्बर 7, 2021 मैत्री झा जब, दक्षिण अफ्रिका
यदि तपाइँ दक्षिण अफ्रिका मा बस्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ लगभग पक्कै देश मा काम गर्नु भन्दा पहिले एक काम प्रस्ताव को आवश्यकता पर्दछ। जे होस्, यदि तपाइँसँग सही सीप छ, तपाइँ सजिलै संग राम्रो तिर्ने रोजगार पाउनुहुनेछ। अस्थायी र कम ज्याला मजदुरहरु, मा
सेप्टेम्बर 2, 2021 एन्टिका कुमारी केन्या, भिसा
केन्या मा एक छोटो बसाई को लागी एक भिसा प्राप्त गर्न को लागी, पर्यटन को लागी वा व्यापार को लागी, संसार मा धेरै पासपोर्टहरु को लागी धेरै सजिलो छ। केन्या को लागी भिसा कसरी प्राप्त गर्ने? तपाइँ www.ecitizen.go.ke मा आफैं दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रपडाउन बाट
कसरी दक्षिण अफ्रिका बाट टर्की को लागी एक भिसा प्राप्त गर्ने?
अगस्ट 4, 2021 मैत्री झा अफ्रिका, नजिकिदै गर, टर्की, भिसा
तपाइँ दक्षिण अफ्रिका बाट टर्की को लागी टर्की सीमा गेट्स (आगमन मा भिसा को रूप मा पनि जान्न सक्नुहुन्छ) बाट भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण अफ्रिकाका मानिसहरु टर्की भिसा आवेदन प्रणाली मा एक ई-भिसा अनलाइन प्राप्त गर्न सक्छन्। जो कोही टर्की को यात्रा
जुलाई 25, 2021 शुभम शर्मा सोमालिया, यात्रा, भिसा
त्यहाँ सोमालियालाई visa 33 भिसा मुक्त स्थानहरू सोमालियाको राहदानीको साथ उपलब्ध छन्, जुन यसलाई विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय राहदानीहरू बनाउँदछ। ध्यान दिनुहोस् कि भिसामुक्त देशहरूको सूचीले सोमालिया पासपोर्ट धारकहरूले पहुँच गर्न सक्ने देशहरूको संख्या प्रतिबिम्बित गर्दछ